### dhammaad ###
Bahda somaliTalk.com waxay umadda Soomaaliyeed la qaybsanaayaan sidaan ugu faraxsanahay go'aankaas ka soo baxay dawladda Soomaaliya, waana go'aankii ugu wanaagsanaa ee ay dawlad Soomaaliyeed qaadatay 22-sano kaddib, waana ugu hambalyaynyaa ummada Soomaaliyeed in ay laga bilaabo maanta haystaan dawlad ayaga (Soomaalida) maatasha, una dhaga nugul shacabka Soomaaliyeed. Waana guul ummadda Soomaaliyeed oo dhan usoo hoyatay.
Qodobkan waa mid lagu diirsaday: Xukuumada Federaaliga ah ee Soomaaliya waxay aqoonsan tahay sharciga qaran ee badaha Law No. 37. ee qeexaya dhererka xadka badda “territorial water” ee gaaraya 200 mayl-badeed iyo continental shelf . Waxay dawlada Soomaaliya ogolaatay xeerka badaha aduunka ee ay wax ka saxiixday 24kii Luuliyo 1989 ayadoo aan ka tanaasulin sharciga qaran.
Libaaxyadii Afrika soo rogaal celiye. Dawladdda Soomaaliya waxaa lagu yiqiiney geesiyaal aan gorodda hoos u rogan oo adduunka wax la qaybsada. Sharciga Law no. 37 waxaa 1972 la sameeyey asagoo juhdi iyo geesinimo ay u gashay dawladdii Soomaaliyeed ee xilligaas, waxaana farxad leh in dawladdii rasmiga ahayd ee xigtey ee maanta ka jirta Soomaliya ay tooshkii halkii ka sii qaaday marka laag hadlayo badda Soomaaliya, kuna dadaalayso in aan xeerkaas badda Soomaaliya ee dhigaya 200 TERRITORIAL Waters ah laga war wareegin.
Tallaada xigta ee aan arrintan ku darsanayno, ee dhiman, waxay tahay in Xeer Dastuuri ah oo Baarlamaani ah laga dhigo qodobada uu xambaarsan yahay Go'aankan golaha wasiiradda Soomaaliya ee ku aadan badda Soomaaliya ee soo baxay June 6, 2013, si xukuumad iyo dawlad kasta oo Soomaaliyeed ee mustaqbalka timaada ay halkaas uga ambaqaado, dhaxalkaasi u jiro - si aan muran dambe la gelin badda Soomaaliyeed.